20 सदर देश गीत तपाईं बस बिर्सनु हुँदैन
संगीत शीर्ष कलाकारहरू
देश संगीतले उदासीन गीतहरूको लागि नामित शैलीको रूपमा प्रतिष्ठा विकास गरेको छ। नीलो महसुस गर्दा मात्र एकमात्र विषय देश संगीत अन्वेषण हो, यो निश्चित रूपमा एक शैली मा महसुस छ। देशका कलाकारहरूले सबै समयका सबै भन्दा धनाढ्य ट्राइजरहरू रेकर्ड गरेका छन्। यहाँ 20 वटा हो।
जर्ज जोन्स: 'उहाँ आजको माया गर्नुहुन्थ्यो'
धेरै puristists को लागि, "उहाँले आजको माया गर्नुभएन" सबै समयको सबैभन्दा ठूलो देश संगीत गीत हो। सन् 1 99 1 मा एल्बममा जारी "म म हुँ हुँ हुँ," यो छ वर्षमा पहिलो चार्ट-टपपर थियो। 2013 मा मरेपछि, गीतले चार्टलाई दोस्रो पटक हिसाब गर्यो।
यस देशमा क्लासिक, जोन्स एक पुरुषको प्रेमको ज्यान गएको छ जुन उनीहरूको सम्बन्धलाई उत्तिकै बनाउँछ र त्यो दिन मर्छ। यो जोन्स को परिभाषित गीत को 1954 मा शुरू भएको कैरियर मा मानिन्छ र दर्जन संख्या 1 हिट भन्दा अधिक थियो।
"उनले आज उनीहरूलाई माया गर्थे / उनीहरूले ढोकामा आफ्नो ढोका राखे / चाँडै तिनीहरू उसलाई टाढा लैजान्छ / उसले आज उनीहरूलाई माया गर्न छोडे।"
डाउनलोड / खरिद गर्नुहोस् "तिनी आजको मायालु छन"
सेमी स्मिथ: 'मलाई यो रातको माध्यम ले यसलाई मद्दत पुर्याउनुहोस्'
माइकल ओक्स अभिलेखागार / गेट छवियाँ
सैमी स्मिथले 1960 को मध्यमा ओक्लाहोमा सिटीको सलाखमा उनको सुरुवात गीत गाए। जनी नगदबाट केही सहयोगको साथ, उनले कोलम्बिया रेकर्ड्ससँग सम्झौता गरे र 1968 मा उनको पहिलो सानो हिट थियो। तर यो गीत उनको ऐतिहासिक 1970 को एल्बमबाट "मद्दत मलाई बनाउनुहोस् यो रातको माध्यम" सेमी स्मिथको विरासत हो।
क्रिस क्रिस्टोफर्सन द्वारा मूलतः लिखित र रेकर्ड गरिएको, स्मिथको संस्करणले देश चार्ट मा संख्या 1 मा चोटी र पप चार्टहरूमा 8 नम्बर सम्म पार गर्नेछ। उनले 1974 मा गानाको लागि बेस्ट महिला महिला आभासी प्रदर्शनको लागि ग्रमीलाई पनि जीत दिनेछन्।
गीतमा, स्मिथले रात बिताउने व्यक्तिको साथ बोल्दै छ, यो निषेधित छ, उसको पति होइन। यो फ्रिक गीत त्यस युगको देश गीतको लागि अनौपचारिक थियो।
"हिजो मरेको छ र गयो / र भोलि आँखाबाट बाहिर छ / र यो एक्लै उदास लाग्दो हुन्छ / यसले मलाई रातभरि बनाउन मद्दत गर्दछ।"
डाउनलोड / खरिद "मलाई यो रातको माध्यम ले बनाउनुहोस्"
हङ्क विलियम्स: 'तपाईंको चीटिन' हार्ट '
GAB पुरालेख / Redferns / Getty Images
देशको सङ्गीतको एक आइकन, हङ्क विलियम्स एसआरले 1953 को नयाँ वर्षको दिनमा मृत्यु गर्नुअघि यो गीत आफ्नो अन्तिम स्टूडियो सत्रमा रेकर्ड गरेको थियो। उनको मृत्युपछि जारी गरिएको थियो, एकल एकल देश चार्टमा पुग्यो र विलियम्सको संगीत विरासतको अंश बन्यो।
गीत विलियम्सका लागि मात्र हिट थिएन। जेनी जेम्स, रे चार्ल्स , लरेटा लिन लिन र लेन्न राइम्सहरू गायकहरूको मात्र केहि छन् जसले यस देशको आफ्नै रौतहटलाई प्रेम, विलाप, र हानिको मुख्य हिसाबले हिट गरेको छ।
"तपाईंको चीटिनको हृदयले तिमीलाई रोपाउनेछ / तपाईं रोए र रोइरहनुहुनेछ र सुत्न प्रयास गर्नुहोस् / तर निन्द्रा सारा रात आउँदैन / तपाईंको चीटिनको हृदयले तपाईंलाई बताउनेछ।"
डाउनलोड गर्नुहोस् / खरीद गर्नुहोस् "तपाईंको चीटिन 'हार्ट"
विन्स गिल: 'यो पर्वतमा'
विन्स गिलले दुई जीवनको सम्मानमा यो बलमा लेखे: विश्व कलाकार केथ व्हाइटले 1988 मा मृत्यु भएको र गिलको भाइ जो 1986 मा मृत्यु भयो। पेटी लवजस्तो र रिकी स्ग्ग्सले सहायक आवाज प्रदान गरे। 1 995मा एकलको रूपमा जारी गरिएको, यो देश संगीत संगीत चार्टहरूमा संख्या 14 मा छानिएको थियो। गीतमा जुन गीत देखा पर्यो, "जब प्रेमले तपाईलाई पाउँछ," देश चार्ट मा नम्बर2मा पुग्यो।
विजेता गिलले यस गीतको लागि 1 996को देश सङ्गीत एसोसिएसनको गीतको वर्षको पुरस्कार पाएका थिए, साथसाथै बेस्ट नर देशको वोकल प्रदर्शन र सर्वश्रेष्ठ देश गीतको लागि दुई ग्रैमिज। गीतमा, गििलले व्हाइटले गरेको गीतको लागि गृहकार्य पनि तिर्नुहुन्छ "म वर्षाको लागि अचम्म लाग्दैन।"
"त्यो पहाड / पुत्रको बायाँ माथि जानुहोस्, पृथ्वीमा तपाईंको काम सम्पन्न हुन्छ / स्वर्ग जानुहोस् शान्तामा '/ पिता र छोराको लागि प्रेम।"
डाउनलोड / खरिद गर्नुहोस् "त्यो पहाडमा बायाँ माथि जानुहोस्"
ब्रायन व्हाइट: 'कसैले एल्सको स्टार'
ब्रायन व्हाइटले आफ्नो 1994 एप्रोम्युब पहिलो एल्बमको साथमा एक स्प्याश बनायो किनभने यसले यो गीत समावेश गर्यो, जुन उनको पहिलो चार्ट-टुप्पिंग एकल भयो। 1995 मा जारी, "कसैले एल्सको स्टार" एल्बमबाट चार एकल एकल थियो, जसले प्लेटिनम चलायो।
यस गीतमा, व्हाइट आफैले एक्लै खोज्छ, चाहानुहुन्छ उसले आफ्नो साँचो प्रेम पाउन सक्छ। उहाँले गलत ठाउँमा हेर्दै यदि उसले राम्रो भाग्य र चमत्कारहरूको कमीलाई लुकाउँछ।
"म अनुमान गर्दछु कि म / यो अरु कसैको तारा चाहिएको छ / यो जस्तो लाग्छ कि अरु कसैलाई प्राप्त गर्दैछ / के म चाहन्छु / म किन भाग्यमानी हुन सक्छु / ती अन्य मानिसहरु / जस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई म चाहन्छु / अरू कसैको तारामा। "
डाउनलोड / खरिद "कसैले एल्सको स्टार"
स्टीव वार्नर: 'स्वर्ग को तल मा छेद'
स्टीव वार्नर एकल, 1 99 8 मा रिलीज भएको छ, त्यस वर्ष देश संगीत चार्टहरूमा संख्या2मा झिक्यो। गीत, आफ्नो एल्बम "बर्निन 'द रोड हाउस डाउन," ले वर्षको वाइनर गीत अर्जित गरे देश संगीत एसोसिएशन र अकादमी अफ कंट्री संगीत दुवैको सम्मान।
गीतमा, वार्नरले युवकको जीवनबाट तीनवटा क्षण वर्णन गर्छन्: आफ्नो दादीको मृत्यु, तिनको पत्नीको मृत्यु र तिनको छोरीको विवाह। मानिसले विवाहको विरूद्ध आफ्नो विगतको विवाहित सोचबारे सोचेका छन्, यो वर्षामा सुरु हुन्छ, जस्तै कि पहिले नै दुःखपूर्ण समय थियो। वर्षाको बूँद, वार्नर बोल्नुहुन्छ, प्रियजनहरूबाट आँशुहरू छन् जुन तिनीहरूसँग हाम्रो चाहन्थे।
"र स्वर्गको फ्लोरमा छेद छ / र तिन आँसूहरू खसेको छ / त्यो कसरी थाहा छ उसले त्यो हेर्दैछ / विच्छेद त्यो अब यहाँ हुन सक्छ।"
डाउनलोड / खरीद "स्वर्ग को तल मा होल"
मार्टिन म्याकब्राइड: 'भगवानको इच्छा'
मार्टिन म्याकब्राइडले यस शताब्दीको पछाडि अघि र पछि केही वर्षमा क्रससोभरको स्ट्राइक पायो। तिनको सातौं स्टुडियो एल्बमबाट चार हिट सिंगल मध्ये एक, "मार्टिन," "भगवान का विल" 2004 मा देश चार्ट मा 16 मा पुग्यो। म्याकब्राइडले यो गीत आफ्नो पारिवारिक प्रयासमा आफ्नो छोरीहरु एम्मा र डेलायनीको गीत गाडिदिए।
McBride एक जवान केटा को बोता छ जो आफ्नो खुट्टा मा ब्रेकस पहनता छ। म्याकब्राइडले गाईको समस्यामा समस्या हुन सक्छ, तर तिनको ठूलो हृदयले उनीसँग कुनै समस्या छैन। गीत एक अनिश्चित नोट मा समापन गर्दछ केटा र तिनको परिवार क्यालिफोर्नियामा जान तयार छ, र म्याकब्राइडले केटाकेटीको बारेमा के सोचेको छ।
"र म उसलाई भन्न को लागी मिल्यो कि केटाले मलाई सत्य देखाउनुभयो /
क्रेईन रातोमा, नोटबुक पेपरमा, उनले 'मलाई र परमेश्वरलाई प्रेम गर्थे'।
"परमेश्वरको इच्छा" डाउनलोड / खरिद गर्नुहोस्
कोलेन राईले पहिलो सूचना प्राप्त गरेपछि उनले देश बुबाको अंश बबबा राइ नामको भ्रमण गरे। उनको पहिलो एकल एकल एल्बम, "सबै म हुन सक्छ", यस एकल को बल मा प्लैटिनम चला्यो, जो 1 99 1 मा देश चार्ट मा नंबर 1 मा छीनिएको थियो। गीत मात्र 30 रेय सिंगल को पहिलो थियो जुन चार्ट मा हिट अर्को दुई दशक।
यस बलमा, राई एक जवान केटाको ज्यान गुमाउँछ जुन थाहा पाउँछ कि उसको दादीको बुबाले आफ्नो दादाको अनुमोदन गरेन र प्रेमिकाहरूलाई अलग राख्न खोजे। एक दाजुभाइले एक पत्र पत्ता लगाउँदा एक योजना बनाई लोभले असफल पारेको छ, उसलाई भनिएको छ कि प्रेम पर्खाइ पर्दछ ... तर आशा नदिनु पर्दैन।
"यदि तपाईं त्यहाँ पुग्नुभन्दा त्यहाँ जानुहुन्छ भने, मलाई नबिर्सनुहोस् / म तपाईलाई भेट्नेछु जब मेरो कामहरु मार्फत / मलाई थाहा छैन म कति हुनेछु / तर म तपाईंलाई तल छोड्ने छैन, प्रतिक्षा र पर्खनुहोस् / र अब र त्यसपछि बीचमा, म तिमीलाई फेरि देख्न सक्दिनँ / म तिमीलाई माया गर्छु / प्रेम, म। "
डाउनलोड / खरीद "माया, म"
ट्रेसी लरेन्स: 'मलाई एक बर्मिंघम पेंट'
एक हराएको प्रेमको सम्झनाहरूले सबैलाई तोड्न र रोदन गर्न सक्छ, र ट्रेसी लरेंसको 2004 एकल "पेन्ट म एक बर्मिंघम" ले धेरै देशको संगीत फ्यान रोकेको छ। लरेंसको एकल, एल्बम "स्ट्राउङ्ग" बाट बन्द, देश संगीत पप चार्टहरूमा संख्या4मा पुग्यो।
गीतमा, एक पुरुषले समुद्र तटमा चित्रकलालाई सङ्केत गर्दछ र सोध्छ कि यदि उनी समुद्र दृश्यहरू भन्दा केही पनि चित्रण गर्दछ। कलाकारले 20 डलरको लागि जवाफ दिन्छ भने उसले केहि पनि प्यान्ट गर्न सक्छ। त्यसपछि मानिसले कलाकारलाई सोध्दछ कि योजनाका चित्रहरू चित्रण गर्न को लागी उनीहरूको हराएको प्रेमको लागि।
"तपाईं मलाई एक बर्मिंघम पेंट गर्न सक्नुहुन्छ / यो केवल शहर को किनारा मा एक छोटा सा घर / योजना को रूप मा देखो / सबै तिर को आसपास जाल / उसलाई वहाँ यार्ड स्विंग / कपास को कपडे मा राख्नुहोस, यो वसन्त / केही समयको लागि त्यो मेरो फेरि हुनेछ / यदि तपाई मलाई बर्मिंघम पेंट गर्न सक्नुहुन्छ। "
डाउनलोड / खरीद "मलाई एक बर्मिंघम पेंट"
जर्ज जोन्स: 'ए फोटोको म (तपाईं बिना)'
यस सूचीमा जर्ज जोन्सको दोस्रो बलाड 1972 बाट छ। "तपाईं बिना नै मेरो तस्बिर" जुन वर्ष चार्टमा5मा लुगा लगायो, जोन्सको लागि एक व्यस्त एक। उनले 1972 मा तीन एकल एलबम रिलिज गरे, साथसाथै दुई-त्यसपछि पत्नी-पत्नीले विनेट। तर उसले पनि ठूलो अल्कोहल विरुद्ध लडाइँ गरिरहेको थियो, र 1980 मा उनको आक्रोश पछि उनको क्यारियरले तुरुन्तै कमी आएको थियो।
यो गीतमा, जोन्स उनको जीवनको प्रेम बिना कसरी गुमाएका छन् भन्नुहुन्छ। उहाँको संसार, उसले गाती दिन्छ, एउटा बगैंचा जस्तो हुनेछ जहाँ कुनै चीज नगर्ने वा नदीलाई सुकेको छ।
"संसारको कल्पना गर्नुहोस् जहाँ संगीत बजिरहेको छैन / त्यस पछि एक चर्चको बारेमा सोच्नुहोस् जहाँ कोही पनि प्रार्थना गर्दैनन् / यदि तपाईंले आकाशमा कहिल्यै नीलोसँग देख्नुभयो / त्यसपछि तपाईंले मेरो बिना मेरो तस्वीर देख्नुभएको छ।"
डाउनलोड / खरीद "मेरो चित्र (बिना तपाईं)"
मार्क विल्स: 'इच्छा तपाईं यहाँ हुनुहुन्थ्यो'
मार्क विलिसले 1 999 मा यस नामको एल्बमबाट यो चार्ट-टुप्पो एकललाई जारी गर्यो। यो सिर्फ 16 हिट मध्ये एक थियो जुन 1996 देखि 2003 सम्म मात्र सात वर्षको अवधिमा शीर्ष 40 मा हुनेछ।
यो बलमाड, विलिस एक व्यक्ति को जोडता छ जो एक यात्रा लिन्छ, आफ्नो पत्नी बता रहेको छ त्यो त्यो रात उनको कुरा गर्नेछु। बरु, उनी उनलाई भन्छिन् कि पति दुर्घटना दुर्घटनामा मरेका छन्। पछि, उनले स्वर्गबाट ​​एउटा पोष्टकार्ड प्राप्त गरे। यो उनको प्रिय पतिको सन्देश हो, चाहना त्यो उहाँ संग थिए।
"के तपाईं यहाँ हुनुहुन्थ्यो, चाहानुहुन्छ कि तपाई यो ठाउँ हेर्न सक्नुहुनेछ / चाहानुहुन्छ तपाईं नजिक हुनुहुन्थ्यो, म चाहन्छु तपाईको अनुहार छुनु होला / मौसम राम्रो छ, यो स्वर्ग हो / यो सारांश को सबै वर्ष र त्यहाँ केहि मान्छे हो / हामी भन्छन्, 'होलो, 'म तिमीलाई सम्झन्छु, इच्छा छ तिमी यहाँ थिए।'
डाउनलोड / खरिद "इच्छा तपाईं यहाँ हुनुहुन्थ्यो"
केरी अंडरवुड: 'बस एक ड्रीम'
अस्टिटा नैशविले / सोनी बीएमजी
केरी अंडरवुडले "अमेरिकन आइडल" मा प्रशंसा गरे जब उनले 2004 मा टिभी शो जीते। त्यस पछि देखि, उनको धेरै हिट भएको छ, यस एल्बम-कार्निवल सवारी "बाट 2008 मा यस चार्ट-टाइपर सहित।
अंडरवुडले जवान दम्पतीलाई जोड दिन्छ जुन पतिलाई युद्धमा जाने गर्नुअघि विवाह गर्नुअघि विवाह गर्नु हुन्छ। धेरै सेवा परिवारहरू जस्तै, जोडाले सँगै भविष्यको सपना देख्छ। तर उनको पतिले काममा मारेको छ, र ती सपनाहरू उहाँसँगै मर्छन्।
"बेबी, तपाईले मलाई किन छोड्नुभएको छ? तपाईलाई जानुहुन्छ? / म सधै सँधै गइरहेको थिएँ, अब म कहिले पनि थाहा छैन / म साँसेल पनि सक्दिन।"
डाउनलोड / खरीद "बस एक सपना"
ब्राड पाइसले र एलिसन क्रेफस: 'व्हिस्की लोभी'
ब्राड पाइसले र एलिसन क्रससले आफ्नै दाहिने देशको ताराहरू हुन्। एकसाथ, तिनीहरूले एल्बम "टायरमा मिड" सिर्जना गरे। यसले 2004 हिट "व्हिस्की लोलेबी" लाई पुर्यायो जसले देश चार्ट मा संख्या3मा हिड्यो र डबल प्लैटिनम चलायो।
यसले वर्ष 1960 को देश संगीत एसोसिएशन अवार्ड र अकादमी अफ कंट्री अवार्ड अवार्डमा गीतको वर्ष र वर्षको भिडियो दुवैलाई जित्यो। बराबरी को यस कथा मा, व्यभिचार, र मृत्यु, एक महिला आफ्नो पति मा धोखा देती छ। आफ्नो पति द्वारा खोजिएको, जोडाले विभाजित गर्दछ र अन्ततः आफैले मृत्युलाई पिउन दिन्छ।
"उनले त्यो बोतल आफ्नो टाउकोमा राखे र ट्रिगर खिचे / र अन्तमा उनको मेमोरी पेन्चियो / जीवन छोटो छ, तर यो समय ठूलो थियो / बल भन्दा थोरै थियो, उसले आफ्नो घुँडामा उठाउनु पर्छ।"
डाउनलोड / खरिद "व्हिस्की लोली"
क्याथी मटटे: 'तपाई कहाँ हुनुभयो'
आइलैंड डिफ जाम
Kathy Mattea यस 1 999 को एकल एल्बम "विल पवनमा" संग शीर्ष-10 हिट थियो। गीतले दुई वर्षपछि बेस्ट महिला महिला प्रदर्शनका लागि ग्रमी पुरस्कार जित्यो।
गानामा, म्याटेटा एक यात्रा गर्ने विक्रेतालाई विवाहित एक युवतीको कथा बताउँछ। जब उहाँ जानुभयो, म्याटेटा बोल्नुहुन्छ, त्यो पनि होइन। गीतको अन्त्यमा, वृद्ध जोडी एकसाथ अस्पतालमा छ। महिलाले स्पष्ट रूप से मीठा बनाएको छ ... जब सम्म उनको पति देखिने छैन।
"तिमी कहाँ गयो? / मैले तपाईंलाई सदाको लागि हेरेको छु र एक दिन / तपाईं कहाँ हुनुहुन्थ्यो? / म आफैं टाढामा छु।
डाउनलोड / खरिद गर्नुहोस् "तपाइँ कहाँ हुनुभयो"
टिम म्याकग्रा: 'यदि तपाई पढ्दै हुनुहुन्छ यो'
देशको तारा टिम म्याकग्राले यस गीतको अकादमी अफ द म्याच म्युजिक अवार्डमा प्रीमियर गरे र 2007 मा लाइभ रेकर्डिंग जारी गरे "एल्बम यो।" यो देश चार्ट मा संख्या3पुग्यो।
McGraw ले भन्यो कि गीत गाना अमेरिकी सशस्त्र सेना को श्रद्धांजलि हो। यसमा, उनी एक युवा सैनिकले आफ्नो परिवारलाई लिखित रूपमा एक पत्रलाई कल्पना गर्छन् जुन उनी युद्धका लागि छोडिरहेका छन्। उनले आफ्नी श्रीमतीको लागि आफ्नो लास बोल्छन् र उनीहरूको छोरी बढ्न नसक्ने उनको अफसोस।
"यदि तपाईं संसारभरि यो आधा बाटो पढ्नुहुन्छ भने / म यहाँ हाम्रो सानो केटीको जन्म देख्ने छैन।"
डाउनलोड / खरिद "यदि तपाइँ यो पढ्दै हुनुहुन्छ"
जेसन माइकल क्यारोल: 'एलिसा लाइ्स'
सोनी बीएमजी / अरेस्टा नाशविले
2004 मा जेसन माइकल क्यारोल को प्रतिभा को खोज मा खोजिएको थियो। दुई वर्ष पछि, उनले आफ्नो पहिलो एलबम, "विटिन" देश को रिहा गरे। एल्बमले तीन हिटहरू खिचेका थिए, जसमा "एलिसा लाइइज", "जो चार्ट" मा नम्बर5मा लुकेको छ।
यो ballad घर मा शारीरिक दुर्व्यवहार ग्रस्त एक स्कूली कथा को सम्झना गर्दछ, अझै पनि उनको स्नेहक आफ्नो सहपाठी र शिक्षकहरु लुकाउँछ। मार्टिन म्याकब्राइडको गीत "कंक्रीट एन्जिल" मा, "केटीलाई बचाउन निकै ढिलो छ।
"उनी कक्षामा झूट गर्दैनन् / तिनी स्कूलमा झूट बोल्दैनन् / एलिसा येशूसँग छ / किनभने त्यहाँ कुनै पनि गर्न सक्नेछैन।"
"एलिसा लाइहरू" डाउनलोड / खरिद गर्नुहोस्
ब्लेक शेल्टन: 'द बेबी'
टिभि प्रशंसकहरूले "द आवाज" बाट ब्लक Shelton थाहा पाउँछ, तर देश सङ्गीत फ्यानहरूले उसलाई 2002 मा "द बेबी" जस्तो हिटका लागि थाहा पाउँछन्। गीत एक नम्बर 1 हिट भए र एल्बम "द ड्रीमर" प्रमाणित सुन।
गीतमा, शेल्टनले एक जना मानिसलाई बोल्छन्, परिवारको बच्चा, जसले सिकाउँछ कि उसको आमा बिरामीको बिरामी छ र मर्नु पर्दछ। त्यो व्यक्ति जो समाचार सिकाउँदा सडकमा छ, उसले आफ्नी आमाको छेउमा छिट्टै जित्न सक्दछ, तर ऊ धेरै ढिलो हुन्छ।
"उनले सोचे जस्तो कि उनी सुतिरहेका थिए / र मेरो परिवार रित्तो भएको थियो / / जब मैले उनको छेउमा भेटें / र मलाई थाहा थियो कि त्यो लिइयो / र मेरो हृदय यो विच्छेद भएको थियो / मैले मलाई कहिल्यै भन्न सकेन अलविदा। "
डाउनलोड गर्नुहोस् / बेबी "बेबी"
मार्टिन म्याकब्राइड: 'कंक्रीट एन्जिल'
मार्टिन म्याकब्राइड यस सूचीमा "कंक्रीट एन्जिल" संग दोस्रो सूची बनाउछ जुन 2005 मा देश चार्ट मा संख्या5मा छ। यो पावर बलमा एक "सबैभन्दा ठूलो हिट" एल्बमबाट रिलीज गरिएको चार एकल मध्ये एक थियो।
जेसन माइकल क्यारोलको रूपमा, म्याकब्राइडले बालबालिकाको दुर्व्यवहार गर्ने कुरा जोड्दछन्। गानामा, उनी एक सानो केटीको कथा बताउँछन् जुन धेरै नै आफ्नै हो। यद्यपि मानिसहरूले आफ्नो सानो शरीरमा कचौरा देख्न सक्छन्, कसैले पनि ढिलो नभएसम्म कुनै पनि गर्दैन।
"एक प्रतिमा छायांकित स्थानमा रहेको छ / माथि उठेको अनुहारको साथ एक स्वर्गदूत केटी / ए नाम एक पोलिश रक / टू टू टूर्टमा लेखिएको छ जुन संसारले बिर्स्यो।"
डाउनलोड / खरीद "कंक्रीट एन्जिल"
जो निकोल: 'म तिम्रो लागि पर्खनेछु'
एक यात्रा को पति को बारे मा एक अन्य गाना जो कभी भी पर्याप्त नहीं घर को भागीदार होना चाहिए, जो निकोलस '2006 हिट एकल चार्ट पर नंबर7पर पहुंच गया। यो एल्बमबाट आएको थियो, "तेस्रो," वास्तवमा, निकोलस चौथो एल्बम थियो। यो सुनियो।
"म तिम्रो लागि पर्खाउनेछु," निकोलसले मानिसलाई बोल्छन्, जसले सिकाउँछ कि उनको पत्नी अस्पतालमा भएको छ र कुटिल बिरामी छ। मानिसले घर चलाउँछ, हर्षित हुन पुग्छ, तर उहाँ धेरै ढिलो हुनुहुन्थ्यो। अस्पतालमा शोक गर्ने व्यक्तिले उनको मृतक पत्नीको एक नोट दियो। यसमा, उनले भन्छिन् कि उसले स्वर्गमा उनको प्रतीक्षा गर्नेछ।
"र यो भन्यो 'म तिम्रो स्वर्गको गेटमा पर्खिरहेको छु / ओ मेरो परवाह छैन कि यो कति लामो समय लाग्छ / र म सेन्ट पीटलाई भन्नेछु म / आउन सक्छु मेरो माया र मेरो सबैभन्दा राम्रो मित्र / यो केहि नयाँ छैन / प्यारी, म तिम्रो लागि पर्खाउनेछु। '"
डाउनलोड / खरिद "म तपाईंको लागि पर्खनेछु"
लुटपाट पनी: 'म कसरी अलविदा भन्न मदत गर्न सक्छु'
गायक पाटी लुटपाटको यो 193 99 मा उनको एल्बमबाट मात्र "हिट म के महसुस गर्छु" भन्ने हिट थियो। गीत दशौं मध्ये एक हो जुन उनीहरूको क्यारियरमा रहेको चार्ट मा रहेको छ जसले पाँच नं। 1 हिट्स र चार प्रमाणित प्लैटिनम एल्बमहरू अब सम्म पुग्यो।
गीतमा, बेकारीले आफ्नो जीवनका तीनवटा दु: खी एपिसोडहरूलाई सम्झाउँछन्: तिनको सबैभन्दा राम्रो साथीबाट टाढा, पतिलाई छोडेर, र उसको आमालाई बिगार्दै।
"र उनको अन्तिम शब्द संग, उनले मलाई बुझ्न / मसाले मसाले मलाई सहयोग गर्न खोजे, समयले तपाईंको पीडा / जीवनको बारेमा परिवर्तनको बारेमा सजिलै कम गर्नेछ, केहि पनि त्यहीं रहदैन।"
डाउनलोड / खरीद "म कसरी अलविदा भन्न मदत गर्न सक्छु"
Terri Clark जीवनी
नेना: द महिला र द ब्यान्ड
जनी नगद: प्रारम्भिक वर्ष र वायु सेना
50 सबै भन्दा लोक लोक संगीत कलाकारहरू
2000 को सर्वश्रेष्ठ देश लव गीतहरूको एक पूर्ण सूची
ग्रेगरी अलन इस्कोव संग साक्षात्कार
विचिता राज्य विश्वविद्यालय प्रवेश
कानून विद्यालयमा लागी
कलेजमा आवेदन गर्दै? फेसबुक फोटोहरू तपाईले अहिले हटाउनुपर्छ
कसरी Microsoft पहुँच मा SQL र हेर्नुहोस्
ईभल () PHP निर्माण
Deindustrialization को4कारण
बुर्लेसक उपकक्षहरू बुझ्न
पोरवा को राजा पोर्स
आर्किटेक्ट Eduardo Souto de Moura को एक परिचय
एनी हचिचिनन उद्धरण
सरल चित्रा स्केटिङ पैर जम्प्स
कन्सोरा रोय III को "टेक्स्टिंग आत्मघाती मामला"
स्वस्थ ब्लेमिश-मुक्त छालाको लागि भिटामिन र खनिजहरू
एक काठ रोटेशन अवधि
जो स्प्रिंगफील्ड बनाइएको वर्ण हो
बे पथ कलेज प्रवेश
दिइएका नयाँ सिद्धान्त (भाषा विज्ञान)
मिशेल ओबामाको कर्मचारी
कसरी इटालियनमा भन्नु हुन्छ
कसरी प्रयुक्त Mustang किन्नुहोस्